Izingxenye zePlastiki ezenziwe ngomshini nezinsizakalo zemishini | Isitolo se-PTJ
Ikhaya > Izinhlobo zezinto ezibonakalayo > Imishini yePlastiki
PRECISION PLASTIC CNC IZINGXENYE ZILINGANISWE ZAPhendulwa
Izinsizakalo zepulasitiki ezingezona ezijwayelekile zokwenziwa kwezingxenye ezincane, ezinkulu nezisindayo.
Indawo yamathuluzi we-PTJ Shop engaphakathi kwendlu ingaphatha zonke izidingo zakho ze-CNC Plastic Machining.
Isithembiso se-PTJ ukulethwa kwenani olidingayo, lapho ulidinga, nakanjani. Lesi sibambiso sisekelwa ileveli yolwazi oluqondene nepulasitiki kanye nesipiliyoni sesitolo semishini esimaphakathi esingenayo. Siyaziqonda izici ezihlukile zombili ukusebenza okuphezulu kanye namapulasitiki okusetshenziswa ajwayelekile.
Onjiniyela be-PTJ nochwepheshe bemishini bazi ijubane lokuphotha elifanele namazinga okuphakelwa okuphumelela ngemishini yepulasitiki. Basizwa ngumnyango wamathuluzi angaphakathi endlini ohlonyiselwe ukudala amathuluzi anembe kakhulu okufunwa yiphrojekthi yemishini yepulasitiki.
Umenzi wangokwezifiso wezingxenye zepulasitiki ezenziwe ngomshini ezenziwe nge-HDPE, I-PeEK, PTFE kanye ne-PVC. Siyi-ISO 9001: 2015 Certified. Cela isilinganiso namuhla!
Xhumana nathi Isiko machining plastic izingxenye imishini namuhla ukuxoxa ngokuningiliziwe kwezingxenye zakho eziyinkimbinkimbi.
Isitolo se-PTJ ngumkhiqizi owenziwe ngokwezifiso we-CNC oplastikhi abenziwe ngomshini kufaka phakathi izingxenye zepulasitiki ezinemba kanye nezinto ezithile. Kwenziwe ngezinhlobo ezahlukene zezinto zepulasitiki ezibandayo ezibandayo.Izinto ezenziwe ngamashidi wensimbi, i-EDM, izinsiza zokushisela nezokuklama ziyatholakala. Izinsizakalo zezimo eziphuthumayo / ezisheshayo ziyatholakala.
Kutholakala ku-22 ubude nge-dia. kuze kufike ku-2.3 / 8 ku. naku +/- 0.0001 in. ukubekezelelana. Amakhono afaka isidina, ukubhola, ukukhwabanisa, ukugaya, ukugoqa, ukugaya, ukupholisha, ukuqamba kabusha, ukuguqula, ukubopha, ukubamba, ukusika, ukusika, ukuthepha, ukugoqa nokugoqa intambo. Izinsizakalo ezingeziwe zifaka ukwakheka kwe-CAD, uhlelo lwe-CAM nobunjiniyela obuguqulayo. Izicelo zifaka izixhumi, izinto zokubopha, okufaka, amagiya, imiphini namavalvu. I-Aerospace, i-appliance, izimoto, umsebenzi wasepulazini, i-HVAC, ezasolwandle, ezokwelapha, ezempi, ezezimayini nezinye izimboni ezisetshenzisiwe. Izinsizakalo eziphuthumayo nezisheshayo ziyatholakala. NJENGOBA kuthobela. Ukulethwa kwe-JIT.
Amapulasitiki omshini enziwe futhi aklanyelwe ukumelana nezimo zokusebenza ezinzima, enikeza ukumelana namakhemikhali nokunciphisa ukungqubuzana.
Quote esheshayo & Service
Precision Machines Izinsizakalo Zokwengeza
Xhumana nathi Isitolo Somshini we-CNC ukuxoxa ngezidingo zakho zepulasitiki namuhla.